သူ့ဘက်တစ်ချောင်း ကိုယ့်သုံးချောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » သူ့ဘက်တစ်ချောင်း ကိုယ့်သုံးချောင်း
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on Jan 8, 2012 in Think Tank | 19 comments
အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ကို လူကြီးတွေ ဆုံးမခဲ့တာ..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ခလယ်ရယ် လက်သူကြွယ်ရယ် လက်သန်းရယ်ဆိုပြီး
ဘယ်သူတွေက လာဘ်စားလို့…..၊ ဘယ်လိုမသမာလို့…..၊ ဘယ်လောက်အကျင့်ပျက်လို့ ……၊
??လို့…. XXလို့….. **လို့…..
အဲဒီတော့ အဲဒီလာဘ်က ဘယ်သူပေးတာလ???ဲ ဘာကြောင့်ပေးတာလဲ ???
အဲဒါလေးလဲ ပြန်ကြည့် ပြန်စီစစ်သင့်လှပါတယ်။
လုပ်ရကိုင်ရ အဆင်ပြေအောင်လို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု့ရချင်လို့၊ ကိုယ်အကျွမ်းမ၀င်တာတွေအတွက် လွယ်ကူအောင်လို့ –
ဆိုပြီး ပေးကြတဲ့ လာဘ် ဆိုတာ ပေးသူကလဲ နဲနဲပါ။ ရသူအတွက်လဲ မများပါဘူး။
ဒါ့ထက် ဆိုးတာတွေကို ယှဉ်ပြမလို့ပါ။
အပုံလိုက်ပေးကြရ၊ ပက်ကနဲ ရလိုက်ကြ၊ စံနစ်ကြီးတခုလုံးပျက်စီးသွားစေရတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာက-
သူများထက် ပိုတဲ့အခွင့်အရေးကို မတရားသဖြင့်လိုချင်လို့…
သူများမသိသေး မရသေးတဲ့ အခွင့်အရေးကို မတရားတဲ့နည်းနဲ့ လက်ဦးအောင်အပိုင်စီးချင်လို့…
မိမိရဲ့အမှား အပြစ်တွေကို မတရားတဲ့နည်းနဲ့ ဖုံးကွယ် ဖောက်ဖျက်ချင်လို့…
မိမိမရထိုက် မရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို မတရားသဖြင့်ရယူဘို့…
ထောင်မြင်ရာစွန့်ပြီး ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပုံအောကြတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု့မျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါမျိုးမှာတော့ ဘယ်သူကမှ တောင်းစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။
အတင်းကို အဓမ္မ –
အတင်းဝင် အတင်းပေး အတင်းထွေး အတင်းလုံးကြတာပါ။
အရှက်မရှိတဲ့၊ စည်းမရှိတဲ့၊ သိက္ခာမရှိတဲ့၊ သီလမရှိတဲ့၊ စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့၊
လာဘ်ပေးသူ ကိုယ်ကျိုးရှာ အချောင်သမားတွေရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အလွန်ကြီးမားစွာပါဝင်နေတာပါ။
ရွာတခြမ်းလောက်အလကားသိမ်းပြီး ကျောင်းတဆောင်လောက် ဆောက်လှူပြတဲ့
စေတနာရှင် အလှူ့ရှင်မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ စားဖားကြီးများလက်ချက်ကြောင့်လဲ
၀န်ထမ်းတွေ စိတ်ဓါတ်တွေပျက်စီး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေပျက်စီး
အချင်းချင်းနဲ့ အထက်အောက် ဆက်ဆံရေးတွေ ပျက်စီးကုန်တာပါ။
အဲဒါတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ တင်ပြ အသိပေး တိုင်တန်း လူထုရှေ့ ဖေါ်ထုတ်ဖွင့်ချကြဘို့
ဒီအခွင့်ထူးခံ ကိုယ်ကျိုးရှာ ၀ိသမလောဘသားကြီးများ ရှေ့တန်းကနေ
ဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝခွင့် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဦးဆောင်ခွင့်ရနေကြသရွေ့
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့
ဘယ်လိုမှ စည်းရုံး၊ ပညာပေး၊ ဆုံးမ၊ သွန်သင်လို့ အောင်မြင်စရာမရှိပါဘူး။
လူမိုက်ဖိုးထောင်ဟာ ဟစ်တလာလောက်တော့ ဘယ်သင်ခန်းစာပေးနိုင်မှာလဲ
လူထုအတွက် စံနမူနာ သင်ခန်းစာဆိုတာ
လူထုသတိပြုမိတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးကသာ ပေါက်ဖွားနိုင်တာမဟုတ်လား။
ကျွန်တော့် အတွေးတိမ်တိမ်လေးနဲ့ အချုပ်ဆွေးနွေးရရင်-
မြွေကိုက်တာအရင် ကုကြပါစို့ ခင်ဗျာ။
ပြီးတော့မှာ ဆူးစူးတာ ထွင်ကြတာပေါ့။
(ဆီမီနာ(၂)ကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း (၂) တွင်- ပါဝင်ကွန်မင့်ရေးကြသော ကိုသစ်မင်း၊မဝေေ၀၊ ကိုကြောင်ကြီး၊ကိုကြောင်လေး၊မပဒုမ္မာ နှင့် ရွာသားများကို ပြန်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။)
အရာရှိ။ ။မင်းနောက်တခါငါ့အတွက် ဟိုဟာဒီဟာတွေ ယူလာပြီးပေးရင် အကုန်မီးရှို့ပစ်မယ်။
လာဘ်ပေးသူ။ ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၊ ကျနော် ထင်းနဲ့မီးသွေးကားတစီးစီ ဆရာ့အိမ်ကိုပို့လိုက်ပါပြီ။
Carrot and Stick (= Incentives and C.Control)
ဆိုတော့ စွဲဆောင်မှု( Incentives )နဲ့ မရဘူးဗျ။
Command and Control အမိန့်ပေးထိန်းချုပ် ဥပဒေနဲ့လုပ်မှရတော့မှာပါ။
အဲဒီအပိုင်းက ကျနော်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းကနေ “ကျော်” သွားတဲ့အပိုင်းပါ။
အဲဒီ တဦးချင်းပြုပြင်ရေးက အဖွဲ့အစည်း၊နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ ပါတ်သက်နေတာတွေကတော့ သပ်သပ်တပိုင်းပါ။
ကျနော့ရည်ရွယ်ချက်ကကျနော်တို့လုပ်နိုင်သော တဦးချင်းပြုပြင်ရေးလေးကို စဉ်းစားကြည့်တာမို့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စကျတော့ကျနော်တို့ တတ်နိုင်တာရဲ့ ဘောင်ကိုကျော်နေပါတယ်ဆိုတော့
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက လုပ်မှရမယ်လို့ ဆွေးနွေးပါရစေ ကိုပါလေရာရေ။
ဆွေးနွေးမှုတွေအများကြီးရှိတာတွေ ရှာဖွေပြီး ပေါင်းစပ်ဆွေးနွေးမှပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဟိုဘက်ပိုစ့်မှာ ပြောကြရင်း ဆီမီနာအပြင်ရောက်လာလို့သာ
ဒီပိုစ့်လေး ခွဲထုတ်ပြီး “ဆန်စင်ရာ ကျည်ပွေ့လိုက် ” လိုက်တာပါ။
တကယ်တော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါ။
လူမှု့ဝန်းကျင်ကို နေပျော်အောင် လုပ်ကြရမှာပါ။
ဥပမာတခုကတော့- ကျွန်တော်တို့ MG လိုပေါ့ဗျာ။
ကိုယ့်ကို ထိုးတဲ့ တစ်ချောင်းကိုကျတော့ ကောက်ထားပြီး ထိုးချင်တဲ့ လူတွေခပ်များများဗျ
ကိုသစ်ပြောသလို..ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် ပြင်ကြဖို့ ပဲ အားထုတ်ကြပါလို့ 
သများတော့ ဒလောက်ပဲ သိလို့ .ဒလောက်ပဲပွားခဲ့ပါတယ်..
(သူ့နာမည်တွေကလဲ တနေ့တမျိုးခေါ်ရင်တောင် မကုန်လောက်ဘူး :D)
သူများခေါင်းပေါ်တင်ပေးတာရယ်… လွှဲချတာရယ် …
ခက်တယ်ဗျာ။။ ခေါင်းစဉ်ကိုယ်၌က သူများတချောင်း၊ ကိုယ်သုံးချောင်း လုပ်ထားမှတော့ မျှတဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်း အဖက်ဖက်နဲ့ တက်ညီလက်ညီ လုပ်မှရတာ။ ဒေါ်စုကို ဗဟိုပြုနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အချိန်က သိပ်မကျန်တော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း စစ်ကျွန်ဘဝနစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိတယ်။
လူဆိုတာ နာရကောင်းမှန်းသိမှ နာတတ်တတ်ကလား။ အခုအခြေအနေက နာနေတာကို ကုဖို့ထက် နာနေမှန်းသိအောင် လုပ်နေရတာမို့ နာမှန်းလည်းသိရော နာနာလည်း လင်ယူသွားသလို ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး နာနာ့ကို သတိရလို့..နာပြောချင်တာပြောတယ်ကွာ နင်နာလည်း နာဖူးလို့သာမှတ်နော်…။
နာ့… နာ… နား…. သွားမှဖြင့်
အခြေနေမှန်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်နိုင်ပြီး စေတနာကောင်းနဲ့ အပြန်အလှန်ထောက်ပြပြီး ထိမ်းကြောင်းပြုပြင် သွားကြဖို့ လိုမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် လိုအပ်ချက်လေးတွေကို အပြန် အလှန်ကူညီပေးသွားကြဖို့လိုပါတယ်။ ချက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တောင် တဖြေးဖြေးခြင်းလုပ်ယူရမှာပါ။ သူများကို တစ်ချောင်းထိုးထားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက် သုံးချောင်းအထိုးခံရမဲ့ အချက်တွေကို ပြုပြင်ချင်စိတ်လေးတွေ ၀င်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်………..
ကျနော်လည်းကိုယ့်ဘက်ထိုးတဲ့ သုံးချောင်းထဲက တစ်ချောင်းစာလောက်လွတ်အောင် စတင်ပြုပြင်နေပါပြီခင်ဗျာ။
လာဘ်ပေးသူနဲ့ လာဘ်ယူသူ တွေကြား
နှစ်ဘက်လုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူထိန်းကျောင်းပြီး
နှစ်ဘက်လုံးက ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပြုပြင်မှ
သက်သာရာရမှာလို့သာ ထင်မိပါတယ် ကိုကြောင်လေးရေ။
ဦးပါလေရာကတော့ ပြောချင်တာကို ထိရောက်အောင်ပြောနိုင်တယ်။
လာဘ်ပေးသူနဲ့ လာဘ်ယူသူဆိုတာ ဘဲဥအစရှာမရသလို ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။
လာဘ်ပေးရန် မလို ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေချိတ်ဆွဲထားပြီးကတည်းက
လာဘ်ပေး ရန်မလို ဖြစ်သွားတော့တာ..
အစလေးလောက်သာ ထိန်းပြောနိုင်တာပါ မမရေ။
အဆုံးနား ဆက်လိုက်သွားရင် ဖေါက်သည် ဘူတာကြီးဆီရောက်ရောက်သွားတယ်…
ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိစေတဲ့ ပို့ စ်လေးတွေကို အပြန်အလှန် တင်ပေးနေကြလို့ ကျေးဇူးပါပဲ..
ကိုအလင်းစက်တို့လို အနုပညာဆိုင်ရာ ကဗျာ/ဓါတ်ပုံ ပိုစ့်တွေဟာလဲ
အနုပညာဆိုတာ လူတွေကို လှုပ်နှိုး… လမ်းပြ… ရင်း ယဉ်ကျေးမှု့ကို ဆွဲတင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်လား..။
သူများမသိသေး မရသေးတဲ့ အခွင့်အရေးကို မတရားတဲ့နည်းနဲ့ လက်ဦးအောင်အပိုင်စီးချင်လို့…
မိမိမရထိုက် မရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို မတရားသဖြင့်ရယူဘို့…
ဦးပါလေရာ ရဲ့စာသားလေးနဲ့ ပြန်မန့် လိုက်ပါတယ်
ဦးပါလေရာက အရှိန်ရလာရင် အဲသလိုပဲ ကိုသန်းထွဋ်ဦးရဲ့..
အခုတလော စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ကိစ္စတွေများနေတာနဲ့
စဉ်းစားရတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ နဲနဲ ရန်ဖြစ်ထားသလိုဖြစ်နေတာပါ။
ဆရာတို့ ဆက်လုပ်ကြပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ နောက်က
ကွန်မင့်နောက်ကျသည်ဖြစ်စေ မပေးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ဘာအကြောင်းလဲ..လို့ ..။
ကိုပါလေရာရေ ဒီကဗျာလေးက တော့ 2010ခုနှစ်က
“yu thaw let : ကျုပ်တို့က လျှပ်လဲပြက်မပြဘူး၊
pay thaw let: မိုးကတော့ဘယ်အလိုလိုရွာမလဲ၊
yu thaw let : ကျုပ်တို့က အပင်ပေါ်ကအသီး
pay thaw let: သစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်ခွ၊
yu thaw let : အသာလုပ်ပါ
pay thaw let: မကြွေ မရွာ လို့ကတော့၊
“yu thaw let :=ယူသောလက်
pay thaw let:ပေးသောလက်
ကောင်းလိုက်တာ ကိုပေါက် ရေ။
အတွေးလဲလှ အရေးလဲလှ လိုက်တာ။
ကျွန်တော်က အတုံးလိုက်ပဲ ကင်စားတတ်တာပါ။
ကိုပေါက်လို အရသာလဲဝင် အမြင်လဲလှအောင်ရေးတာမျိုး
သတင်းထောက်က.. တမင်တကာကို.. လာဘ်ပေးပြီး.. ခိုးမှတ်တမ်းတင်.. တကမ္ဘာလုံးသိအောင်. အထောက်အထားနဲ့.. .ဖြန့်ပေးကြည့်ပါလား…။
ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ပြုတ်သွားပြိး.. နောက်ဆို.. ဗြောင်လဘ်ပေးယူ… လုပ်ရဲသူတွေ..နည်းသွားလိမ့်မယ်..။